म सबैको किशोर दाइपुस्तक अंश : मेरो समय
किशोर नेपाल चार दशकदेखि पत्रकारिता र साहित्यमा सक्रिय छन्। राजनीतिक विश्लेषणमा पनि उनको दक्खल छ। आइतवार उनको संस्मरणात्मक किताब 'मेरो समय' बजारमा आउँदै छ। त्यही किताबको...	जाडोमा 'हट' बन्न खोज्दाकाठमाडौँमा त्यो पनि साँझपख ज्याकेटले पनि जाडो थाम्न मुश्किल परिरहेको काठमाडौँवासीलाई अवगत छ। यस्तो जाडोमा पनि आफूलाई 'हट' देखाउनुपर्ने बाध्यता छ, हिरोइनहरूलाई। न्यानो पहिरन लगाएर पूरा ज्यान ढाक्दा राम्रो नदेखिने...	प्रिये, तिमी कन्या हौ कि कुमारी हौ?“भाउजू, काकी, आमा, माइजू र कतिपयका श्रीमतीहरूले अध्ययन गर्ने प्रौढ पाठशाला हो कि जस्तो क्याम्पसको नाम 'पद्म कन्या क्याम्पस' राखिएको छ। “मलाई क्या हाँसो उठ्यो। दुई सन्तानकी आमा मेरी काकीले...	खतरनाक पिरतीकास्की, पुम्दीभुम्दीकी चाँदनी बराल र कलिम शेख प्रेममा थिए। डेढ वर्षसम्म चलेको उनीहरूको प्रेम शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्यो। बिस्तारै कलिमलाई चाँदनीप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो। उनीसँगको सम्बन्धबारे अरूले थाहा पाउलान् भन्ने पिर...	वर्षा राउत भन्छिन्- 'पंखाअगाडि कपाल हल्लाउँदै नाच्थेँ'
अनिल यादव म्युजिक भिडियोमा व्यस्त मोडल हुन्, वर्षा राउत। तीन वर्षमा उनले ८० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छिन्। भिडियोबाट पाएको लोकप्रियताकै कारण उनले फिल्म 'नाइँ नभन्नू ल–४' मा काम गर्ने मौका पाइन्। फिल्म '६क्का ५न्जा'मा पनि उनले अभिनय गरेकी छिन्।… विस्तृतमा
सङ्गीत श्रोता अघिल्लो वर्षको वैशाख १२ गते एउटा ऐतिहासिक त्रासदीको दिन थियो। जुन दिन नेपाल सम्पूर्ण रूपमा आतंकित भयो, हजारौँ मान्छेहरूको एक्कैदिनमा ज्यान गयो। एक्कैदिनमा हजारौँ मान्छे घाइते भए, हजारौँ हजार घरबासविहीन र आफन्तविहीन भए। हजारौँको चिलबिचिल भयो। शक्तिशाली भुइँचालो गएको त्यो… विस्तृतमा
श्यामल जब टोलका सारा मानिसहरू बेपत्ता दौडँदै खाली चउरतिर आए, तीमध्ये धेरै रुँदै थिए। तिनीहरू सबै आत्तिएका थिए, कतिका आफन्त घरभित्रको शौचालयका ढोका खुल्न नसकेर भित्रै बन्द थिए। कति भर्याएङका रेलिङ समातेर रोइरहेका थिए। विस्तृतमा
शुक्रवार सम्पादकीय वैशाख ११ नजिकिँदै जाँदा नागरिकमा बेग्लै प्रकारको उत्साहको सञ्चार हुन्छ। लोकतन्त्रमा निहित सौन्दर्यका कारण जनतामा उत्साह आउनु एउटा पक्ष हो। तर, यसबाट जनताले पाउनुपर्ने अधिकार र सुबिस्ता अर्को पाटो हो। लोकतन्त्र जनताका पीरमर्का समाधान गर्ने विधि भए पनि यो स्वयंले… विस्तृतमा
17 Apr 2016 आइतबार ५ बैशाख, २०७३
नागरिक यस्तो लाग्छ– देशमा भाग्य र अन्धविश्वासको सुपरमार्केट नै चलिरहेको छ। आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित मान्छेहरूलाई चिकित्सकले औषधि लेखिदिएजस्तो गरी ज्योतिषहरू पुर्जीमा रत्न–पत्थर सिफारिस गरिरहेका हुन्छन्। 'सोचेको पूरा हुन्छ, दोष काटिन्छ, ग्रहशान्ति हुन्छ, धनलाभ हुन्छ' भन्ने जस्ता भ्रमको खेतीमा फसेर औँलामा पत्थरजडित… विस्तृतमा
एजेन्सी फेसबुके साथीले पठाएको क्यान्डी क्रस खेल्ने आमन्त्रणसहितको 'नोटिफिकेसन'लाई पछ्याउँदै तपाईं पनि क्यान्डी क्रस खेल्न थाल्नुभएको त छैन ? यदि थाल्नुभएको छैन भने के फुर्सदको दिन खेल्ने योजना बनाइरहनुभएको छ ? यदि यस्तो योजना बनाउनुभएको छ भने होसियार हुनुस् । किनकि,… विस्तृतमा
खगेन्द्र संग्रौला यस कार्यक्रमका उद्घोषक मित्र मित्रलाल पंज्ञानी अन्तर्यामी हुनुहुन्छ क्यार। त्यसैले त उहाँलाई र सायद प्रलेसका अन्य मित्रहरूलाई लागेछ– खगेन्› संग्रौला सम्मान ग्रहण गर्न आउला र? मित्रलालजीहरूले कल्पना गर्नुभएजस्तै यसमा मेरा पनि दुविधाहरू थिए। विस्तृतमा
14 Apr 2016 बिहीबार २ बैशाख, २०७३
डिबी खड्का अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको दैनिकी अचेल फेरिएको छ। उनको आफ्नो 'सेड्युल छैन', नयाँ शक्ति नेपालको 'सेड्युल'मा जहाँ पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। उनको लवाइ पनि फेरिएको छ। वानपिस र हाई हिलमा सजिएर हिँड्दिनन्, कुर्तासुरुवालमा पुग्छिन्। खासमा उनको भूमिका फेरिएको छ। अभिनेत्रीबाट उनी… विस्तृतमा
नागरिक प्रा. पी खरेलमेरो विचारमा नेपालबाट प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाहरूमध्ये विविधता, लेखनशैली, चित्र प्रयोगका हिसाबले शुक्रवार अब्बल पत्रिकामा पर्छ। बजारमा थुप्रै पत्रिका स्थापित भइसकेको अवस्थामा शुक्रवार प्रकाशनमा आएको थियो। विस्तृतमा
StartPrev1234…NextEndPage2of 113	भर्खरै...